Jaamacada jobkey Oo Siminaar U Qabatay Arday Ka Qalinjabisay Jaamacadaha Iyo Dugsiyada Sare | Radio Muqdisho	Wednesday, June 19th, 2013	Bogga Hore
Jaamacada jobkey Oo Siminaar U Qabatay Arday Ka Qalinjabisay Jaamacadaha Iyo Dugsiyada Sare
Published on August 17, 2012 by Canab · 2 Comments · 1,615 views
Siminaar lagu baranayay wax qoriska iyo aqrinta englishka ayna soo qaban qaabisay jaamacada Jobkey ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qeyb galeen ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha iyo duqsiyada sare ee dalka.
Siminaarka ayaa waxaa ka faa’ideystay arday gaareysay 200 isla markaana ka soo jalin jibisay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka waxaana u jeedkiisa ahaa sidii ay ku baran lahaayeen qaabka aqrinta iyo qorista Englishka loo sameeyo waxaana siminaarka ka qeyb galay mas’uuliyiinta Jaamacada Jobkey.
Agaasimaha jaamacada jobkey C/casiis Caagane oo ka hadlay siminaarka ayaa sheegay ahmiyada ay ardaydaani u leedahay siminaarkaani iyo cashiradii ay ka faa’ideysteen intii uu socday siminarka waxa uuna uga mahad celiyay ardayda sida wanaagsan ay uga faa’ideysteen cashiradii la siiyay.
Qaar ka mid ah ardaydii ka qeyb gashay siminaarka oo sidoo kale la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay wax badan ka faa’ideysteen siminaarkii ay soo qaban qaabisay jaamacada Jobkey kana faa’ideen wax badan.
hasan says:	August 18, 2012 at 9:20 am	mashaa allaah walaaji jaamacada is xilqaanaatay waaye JOBKEY allaha daaysto
Reply »	shaafaa says:	December 2, 2012 at 1:35 pm	maasha Allah jamacadae jobkey waa tubta guusha mustaqbalka hadaba waxan u sheegi lahaa dhamaan in ala intii rabto jamacada tayo leh oolaga aqoon san yahay dunida dacaladeyda hadaba horay ugara jamacada jobkey